Nzira yekuderedza kuwedzera kuwandisa paShoko reShoko rako reShoko - ITS Techschool
Pakaitika mukana wekuti tine dhora nguva imwe neimwe kana mumwe munhu ataura kana kuti akabvunza mubvunzo pamusoro pekukwira kwepurogiramu, tinenge tiri vashandi. Izvi zvinoreva kuti, zvakawanda zvave zvataurwa, zvakanyorwa uye zvine ruzivo pamusoro pe "chikara" basa rematric inoratidzika kutyisa chimwe nechimwe.
Panguva iyo Bounce Rate Inofanira Kukushusha Iwe
Chikonzero Nei Kuderedza Kuwana Mitengo paShoko Rako rekunyorwa kweShoko
Deredza kudhura Bhizinesi paShoko rako rePepa reShoko
Bounce Rate ndiMutric Satisfaction Metric
Zviri nani kuchinja kutengesa
A High Bounce Rate is Bad for WordPress SEO
Kupera Kuwedzera Kuwedzera Mari paShoko Rako Rokunyengetedza
Ita Kuti Tsika Yenyu Ive Yakaoma
Ita Kuti Kuwedzerwa KweShoko Rako rePepa yePepa
Shandisa WordPress Site Navigation
Ita Kuti Nyaya Yenyu Iwedzere Kuderedza Kuwedzerwa Kwekuwedzera
Kuvandudza SEO yako uye Advertising PPC
Bounce Rate uye Kubatanidza
Settle Broken Links
Itaiwo Mashoko Akafanana
Chero mamiriro ezvinhu, izvi zvinenge zvichienderana nechikonzero chekuti vazhinji vanonyanya kushamisika apo vanongoridza maitiro anotsanangurwa kazhinji havakwanisi pfungwa yakajeka pamusoro pechinhu pamusoro pekunyadzisa kunonyadzisa, kana zvichida chero ipi zvayo imwe yematrico kusvikira panguva iyo . Kunaka kweNaivety inorarama pawebhu. Izvo zvinotyisa sezvinotyisa.
Heino chinyorwa chechokwadi zvisinei: Bounce rate iyo inonyanya kukosha kwevanhu vanosiya nzvimbo yako pasina kubvunzurudza chero peji imwe kunze kwepano peji. Kunetseka zvikuru? Tinofanira kusimudza chifukidzo chekuvanzika kubva pachikara ichi chinonzi bounce rate yekupedzisira.
Zvakadini isu tinogamuchira zvimwe zvatinotarisira zvinotsvaka "WordPress muongorori" muGoogle, uye nzvimbo yako inouya pakati pekutanga gumi (10) inouya pamusoro pechiratidzo chekuti iwe wakatora zvakatora mushure meShokoPress SEO maitiro akanaka. Kubvira pakufungidzira kwako "Nzira Yokusarudza Pakupedzisira WordPress Consultant" ikozvino inoratidzika kusinganzwisisiko nekuda kwemeta inofanirwa iwe kusimbisa Google, vanoenda kunzvimbo yako. Ichi chinyorwa cheku blog chinoshanduka kuva ndima yako peji, kana kuti "chikamu".
Chero zvazviri, pavanosvika panzvimbo yako, vanokurumidza kukuwana iwe hausi izvo zvavakatarisira, saka vanorova kumashure kumashure, tongedza imwe URL kana kukandira PC yavo kunze kwehwindo. Basa iro rakanyanyisa rekusiya peji peji risina kushamwaridzana nezvose zvasara zvewebsite yako inozivikanwa sekumhanya.
Kana iwe ucherechedza mabhenekeri aya mushure mechinguva, uye shure kwekuenzanidza ivo nehuwandu hwehuwandu hwevanhu vakaenda panzvimbo yako, iwe unowana chikamu. Ita tsananguro yehuwandu nehuwandu uye iwe unenge uchitaridzika.
Bvumira izvi zvinyorwa kuti zvipinde mukati. Heino mutsara unofadza kuti unyatsobudisa pfungwa yacho, Fungidzira kuti WordPress mupiriridzi wepamusoro akawana 1,000 vashanyi, uye 750 yakasara pakarepo pakuongorora chimiro, iwe unowedzera huwandu hwaizova:
750 / 1000 = 0.75 = 75%; Bounce rate = Bounces / Vose Vashanyi x 100%
Panguva iyo Bhura Rako Rinofanira Kukushusha Iwe
Sezvo isu tine "izvo" kubva munzira yakarohwa, ndeipi iyo inofanira kuwedzera kukura kwako? Pandakanga ndichiita zvandaifamba, ndakapfuura nehana yakanaka kwazvo yeNeil Patel iyo yaiva nemitengo yepakati yemadhora ekutengesa mazinga. Kupedzisa masikati mabhidhiyo emabhuku uye kubhadhara mazinga akafanana ne98%, akatarisa kuburikidza nemashoko ekukwazisa pa 70 - 90% uye zviri munzvimbo ye40 - 60%. Nzvimbo dzekutungamira nzvimbo dzakasvika ku30 - hafu, dzakatevedzwa nezvitengesi munzvimbo dze 20 - 40% uye dzinotungamirirwa nehutungamiri panzvimbo ye10 - 30%.
Kakawanda, iwe unofanirwa kusimbiswa kana Shoko rako rePePress rinowedzera huwandu hwe60%. Pakati pehafu yakakura, kunyange pane imwe nguva iwe unogona kuverenga pasi pe10%, iwe unyanzvi. Edza kusapika maonero asi iwe unofanirwa kuverenga (kana kuti fungidzira pamusoro) kuwedzera kwepurogiramu yako pamusoro pezviratidzo zvakanyorwa.
Somuenzaniso, pane mukana wekuti wakatotonyora kubhadhara kwe95%, asi zvakadaro wakaunza izvozvi ku65% mushure mekugadzirisa matanho ekudzorera, semuenzaniso, avo vatichagadzira pano nhasi, unofanira kufambisa nokuti ichocho chinoshanduka kushamisa, pasinei nokuti inopfuura 60%.
Panguva ino, iwe unofanirwa kuyeuka uko kune chokwadi chemhando dzeShokoPress dzenzvimbo, uye kunyange zvinhu, izvo zvichava nepamusoro bounce mitengo sechinhu chaicho. Mifananidzo yakanaka ndeye WordPress peji rimwe peji. Chimwe chezvinhu zvinogona kuva nepamusoro bounce chiyero nderimwe peji yekutenda iyo haina kukurudzira kune imwe peji. Nzvimbo dzekutsvaga, semuenzaniso, shoko rekuIndaneti rinotaura zvingangodaro rakava nehuwandu hwemadhora, sezvo vatengi semitemo usingadi kudarika peji ine tsanangudzo yavanotsvaka.
Yeuka chimwe nechimwe chezvifungidziro izvi paunenge uchisarudza kubhadhara kwako. Chero mamiriro ezvinhu, nekuda kwezvikonzero zvose uye chinangwa, 60% ndiyo yedu yepamusoro inowedzera. Kupfuura izvozvo, iwe uri munzvimbo yengozi. 40 - 60% uri kurarama, 10 - 40% uri kuita zvakanaka, uye <10%, iwe unofanirwa kupembera.
Takawana zvakasimba izvo uye nguva. Mune mhaka ipi zvayo, sei ichange iri pfungwa yakanaka yokuti iwe uedze kutora mutsara payo yepamusoro yekuputika? Sei zvakakosha kuchengetedza zviduku zvisinganzwisisiki zvishoma? Ndichange ndichikurumidzira, saka tinogona kusvika kune zvakarongeka sezvino.
Ivai nemuenzaniso kwandiri nzvimbo yakakwirira, uye ini ndichakuratidza nzvimbo yakakanganisika nevatengi. Kunze kweimwe peji-locales, online izwi references, The Million Dollar Homepage uye al, chero nzvimbo yepamusoro ine bhizimusi yepamusoro inofananidzwa nevarombo vanoita basa.
Pamwe panjodzi yokuti kubhadharwa kwepabonde kwakaderera, uri kuita chimwe chinhu chakarurama, uye iwe unofanirwa kuzadzisa zvakawanda zvauri kuita. Muchiitiko chekuti chakanyanya kukwirira, iwe unofanira kutora imba yako yose pamwe chete pamusana kuti zviri nani kuti unobatanidzwa nevatengi vanomhanya sechikwata chisingatauriki ne ...
Zvichida iwe unogona kubatsirwa neShoko rako rePepanema, unoda kuchinja kune vasakosha zvikuru kune vanowanzopotsa, vatengi, kana vakatendeka uye vanodzokorora vatengi. Unenge uine nguva inotambudza inoita izvi kana vanhu vasinganamatira kuzotarisa pane zvakasara zvesaiti yako. Muchiitiko chekuti vanhu vose vanoita pamashizha enyu ehurukuro vanobva vabuda, iwe wakarasikirwa nehurumende.
Iwe unoda tarisiro yako yekuita kuti vabatanidzwe uye mazano ekutora matanho anobata kana iwe uri kubhadhara mabhiriro. A low bounce rate ndiyo chiratidzo chechokwadi vanhu varikusiya purogiramu yako pakarepo vanosvika. Kusiyana kunoramba kuripo.
Cherechedza: Iwe unogona kunge uine huwandu hwekukwira uye huwandu hwekuchinja huwandu.
Imwe nyaya yakanaka ndeye WordPress peji imwechete iyo inokumbira kuti matarisiro ako akushevedze iwe. Muchiitiko apo 1000 vanhu vanoenda peji, uye 800 yakakudana iwe, iwe unokora 80% shanduko yekutarisa pasinei nokuti iwe unogona kunge uri kutengesa kuwanda kweiyo 100%.
Chimwe chiitiko: Ngatimboti iwe uchiri kutumira chinhu chako, uye kusvika kumugumo wepeji yako yehurukuro, iwe unosanganisira kuwirirana kune web-based social networking records kuti ikure boka. Iwe unogona kuwedzera kusimbisa boka rako pasinei nokuti iwe unogona kuti nzvimbo yako iri kunyora kukwira kwepamusoro.
Izvo zvingaita, kana CTA yako ichibatanidza kutora kune imwe peji panzvimbo yako (saikumbira kana kuti chibvumirano chemugumo), haugoni kuva nehuwandu hwekushandura hurefu nehuwandu hwekuwedzera. Vaviri havagone kuenda pamwechete - moto nemvura.
Chero hurefu hupi hwenguva iyo muchengeti anobata pamwe nejiji yako mune chero ipi zvayo yemararamiro ako, unochinja. Pamusana pekuti vanobva pasina kushamwaridzana nezvose zvasara pamapeji ako akabatanidzwa, iwe uchava nepamusoro-soro kuwedzera. Kuenderera mberi mberi ...
BAM! Heino chimwe chinhu chinofanira kumira zvakakwana kuti chionekwe. Chii? Vanhu vanosiya zvose zvavari kuita uye vanoisa pfungwa paunotsanangura SEO. Izvo ndezvekudaro, zvakanaka, pasina "kusununguka" kunobuda kubva kune-web crawlers, chii chinoshandurwa mutengo uye vatengi vanoita basa?
Bvuma, iwe unogona kungotora kufamba kubva kune zvakasiyana-siyana, zvisinei kana muchiitiko chauri kusashandisa SEO, unonzwa kurasikirwa kwedu pane zvakawanda zvebhizimisi. Iwe uri kutosiya mari patafura.
Nei zvakadaro? Pakutanga, masangano akawanda ari paIndaneti anotora bundu guru rebasa kubva pawebhu. Zviri pachena, iwe ungasarudza kusakanganwa. Kunze kwekuti, vagari vese vanoedza kurongeka kuburikidza nemashandisi ekutsvaga webhutori ndivo vanonyanya kutengesa vatengi. Nokudaro hapana mubvunzo, SEO ndiyo thaaat inokosha. Uyezve, kuverenga maitiro ekukwirira kwepamusoro kwete mararamiro aunoshandisa purogiramu yakasimba yeSEO.
Iyi ndiyo nzira iyo zvipembenene zveGoogle zvinoshandura zvakanyanya kuwanda kwehuwandu hwevanhu: Vanhu vari kusiya nzvimbo yako nokukurumidza vanosvika pakuona kwekuti iwe hauna basa. Iwe hausi kupa chero rukudzo, saka iwe haufaniri kuita zvinotyisa SEO kuisa. Zvinhu zvose zvinofungidzirwa, WordPress yako nzvimbo yakasimudzirwa kumashure, uye kupikisa kwako kunotora nzvimbo yako, uye basa. A high bounce rate iri zvechokwadi inotyisa.
Tine sarudzo yekutanga. Parizvino isu tinofanira kuita kuti tinyarare. Pachine nguva yakarembera, iwe uchaputika icho chakakwirira chechikwereti chave chave chiri kunze kwemugwagwa wako kusvika pakubudirira kweInternet. Tisati taenderera mberi, ndichakukurudzira kuti uite mazano aya nokukurumidza, kwete kungovaverenga. Basa rakajeka, uye sezvo tiri kukurudzira bhizinesi rako reShokoPress, iwe unofanirwa kuva nenguva dzakanaka paunenge uripo. Pakarepo, pano tinoenda ...
[Kudzidza magwara edu] kunotipa zvikwereti zvinokosha zvezivo zvinotungamirira kufambira mberi kwechinhu chedu pakushanda kwedu kwakanyanyisa uye pakombiyuta. Inotiratidza zvakananga kuti vanhu vari kushandisa sei chinhu chedu pane zvikamu zvose. - Jeffrey Fluhr, CEO SpreeCast
Ndiyo pfupi uye yakareba yaro? Iwe unenge uchinge uchinge uchingororere bounce rate pa WordPress yako nzvimbo paine mukana wekuti iwe hauzive kuti nyaya yacho iripi? Tsvakurudzo shomanana ichaenda kure mukukubatsira iwe kuti uise zvakananga nei iwere uchinge waenda-the-graph bounce rates.
Zvichida iwe uri kutora muvanoshandiswa kubva kuChina asi shoko rako rezvechirevo uye zvinhu zvinoshandiswa kune vanyengeri muU.SA. Zvichida zvaunofarira hazvigoni kuratidzira izvo zvevanyengeri vako. Iko kukunda kwako kwakakwirira kunowanikwa nevashanyi vatsva kana kudzoka here? Zvichida icho chinhu chinoyevedza; your site disillusions portable clients.
Zvinogona kuva chero chinhu. Kudenga kwako kwepamusoro kunogona kunge kuri kugadzirisa zvimwe zvikamu chimwe, zvisinei iwe hauzombozivi kunze kwekunge iwe uchitarisa basa rako. Nokuda kweizvi, iwe unoda kambani yekuongorora, somuenzaniso, Google Analytics, Piwik, Crazy Egg, Clicky, uye Web Trends kungoti vatauri.
Fungisisa zvinhu zvose kubva mune zvemagariro evanhu kune nzvimbo yepasi, vateereri maitiro, uye varindi vekushanyira vashanyi vanoshandisa pakati pezviyero zvakasiyana. Tsvaga zvose zvingangodaro murwendo urwu - iwe unofanirwa kuva nemafungiro ose pamusoro pebasa rako pamunwe wako. Icho ndicho chinhu chandinodzidzisa Chemhemisti yangu kuti atizive-tive nezvinhu izvi pamunwe wako, kana kuenda kumusha uye sarudza mune polytechnic. Haha, mamiriro ezvinhu akare akare.
Kwemaminiti, zvakadini isu tinotamba izvo zvido zvatinoda zvakakwana kudai. Funga kuti uri kutsvaga motokari yeAngdi yakapfuura. Rima rakajeka Audi A4 kuti ive yakarurama. Tarisawo zvakafanana nemigumisiro yekutanga muGoogle haisi nzvimbo yeApredi chaiye, sezvo mwana iyeye anonyatsokurumidza.
Iwe uri kunyatsofambisa kukwira motokari iyo pasi pasi motokari yako nguva ino imwe vhiki kubva zvino. Saka unoenda kuGoogle, tsvaga Audi A4, uye mukana wekuti "newcars15.com" inotora nguva inotora nguva isingagumi yenguva, uye rwendo rwakapoteredza zvakasikwa. Ungaramba uchingotenderera here kana kushandisa $ 30,000 bucks kune imwe nzvimbo? Ndinoziva kuti ndaisazosimudza, muchiedza chekuti nzvimbo dzepamusoro dzinogona kukonzera upenyu huri mamuri.
Tarisa imwe neimwe yemaminitsi anokosha iwe uri kuparadza. Ndezvepi, iwe unotendesa hupi uchatora Audi A4 yako kwevhiki imwe kubva ikozvino kubva ku-newcars15.com kana nzvimbo yacho inotora nokusingaperi kuti igare? Bvuma, ini ndinogona kuitora kure, asi izvi ndizvo zvinoita kuti ndifungisise kuti iwe unowana pfungwa, izvo zvatiri mamiriro edu ndezvekuti: Shanduro inonzwisisika ichave yakafuridzira tarisiro iyo inorambidza kubata kumashure nekukurumidza kupfuura ivo vanoona izvo iwe 'kubudisa. Takanyora nyaya iyi zvakanyanya muNzira yekuderedza Shoko rako rePeji yePeji yePeji, naizvozvo handingatongopindi mumashoko ekufarira.
Tine mwana uyu muzvikamu zvishanu zvemazuva ano, uye isu tichiri kuzouraya parkway. WordPress site renzira, sei izvi zvishoma zvinowedzera mararamiro? Izvo zvinokosha; imwe nzira inotyisa inofanana nemutungamiri (kana chiratidzo chechiratidzo) chinotungamirira vatengi kuburikidza newebsite yako.
Mary Jane anoenda kuGoogle muchikumbiro chekuwana mhinduro yepamusoro yehuwandu hwekukura kwake kweBusinessPress-based business. Pamusana pehuwandu hwemashandiro awakaisa mukugadzira mabhuku ekutyisa, yako inofungidzira "20 Best Responsive WordPress Themes ye2015" chinyorwa inotanga kutanga kuGoogle, uye inofamba.
Anokanganisa nzvimbo yacho yose, uye kunze kwekushingaira anosarudza kutarisa peji rako rePeoplePress kuti anogona kushandisa zvakanakisisa kubva pamusoro wako, kumativi ezasi kana pamakumbo emamatoji menus. Pasinei nokuti iwe unotadza kuti haazotengi chero yenyaya dzako, haazofungi nezvekutsvaga.
Iye zvino tarisira Maria Jane. Funga nezvaJohn Doe uyo akangoona nzvimbo yako (kuburikidza nenzira ipi neipi) uye anoda kuwana zvimwe dheta. Zviri nyore sei kuti John Doe awane zvinyorwa panzvimbo yako yepaiti kuburikidza nenzira yako yekugadzirisa? Iwe unofunga kuti acharamba achikomberedza mumamiriro ezvinhu zvokuti haagoni kuwana zvaanotsvaka?
Nzira yakanakisisa yekugadzirisa zvinhu hazvina kuoma kushandisa. Zvakakosha uye zvakajeka, izvo zvinondibatsira kuti ndiyeuke iyi imwe nguva ndakanga ndiri kutsvaga maitiro ekudzidzisa maJava. Saka ndakasvika pane imwe nzvimbo inoremekedzwa nesangano rakanaka (hapana zita rinodonha, kwete squealing).
Nzvimbo yacho yaitarisa kusinganzwisisiki - mutsara unyanzvi uye mabasa. Ndiri kukurukura nezvemhando yewebsite yaunogona kuvimba zvakakwana kuti usarudze sechinhu chisingaiti. Chero mamiriro ezvinhu, izvi zvaive ndisati ndatora chikwata pakusvika pakusununguka kweJava mirayiridzo inofanirwa kukurudzira, iwe unoziva, zvakafanana neni.
Nyaya yemazuva mashomanana, basa rekudzidzisa rakange rakazara nemazana mashomanana mune imwe mhando yemenyu, uye ini ndakatora nguva yakawanda sezvinodiwa pamusana pokuti ndiri nemukuru mumwe murwere, uye ndakanga ndisingachadi kuwana nzvimbo yakarurama yeJava kurovedza muviri. Chero zvazvingava, ndakanzwa kunetseka nekuchera kudonha pasi menus kuti ndiwane nzira yega yoga, iyo haina kuita chikoro pamusoro pezvido zvangu zvinhu zvose zvinofungidzirwa. Meh. Mugumo wemirasi.
Munhu anonyanya kufara haazove nesimba rakakwana rokutarisa pamusoro pemugwagwa wako wose kune zvimwe zvinhu zvavanoda zvechokwadi. Ita chero chinhu chakakosha chinoshamisa chiri nyore kugona kuburikidza nenzira yako yekugadzirisa nzira, uye bounce yako mitero pasina mubvunzo ichadzika. Ndiri kuparadzanisa kwauri here? Heino mhepo inotora:
Ita zvakananga, nzira yakarurama-mberi
Maminitsi makuru anotarisa kushamisa, asi iwe unonyatsoda here?
Wedzera pepa redhipi kune yako WordPress site. Iwe unogona kushandisa ma modules, somuenzaniso, Google XML Sitemaps kana kushandisa musoro unotsigira sitemaps
Wedzera mamamato ekuenda kumusoro wako, nhanho uye nechepamusoro
Itaiwo makirasi, mafaira uye mabhii kudivi rezasi
Itaiwo bhokisi rinotevera sekuchengetedza gadget kunofanirwa kuti menyu enyu awire pasi. Bhokisi rako rekubvunza rinogonawo kusimbisa nzira yako yekugadzirisa uye kukonana kwevateresi. Shandisa mu module, somuenzaniso, Relevanssi kuumba yakanyanya uye yakananga yekutsvaga yekutengesa yewebhu yako WordPress
Paunoenda kunzvimbo yekutengesa, iwe unotora nguva yako muzvitoro zvinopa zvigaro zvakashata kana zvakashata here? Ndinokutengesa iwe usingaiti, kunze kwekuti iwe uri muridzi weimwe soro yakadaro, iyo inoyamwa pasina mubvunzo.
Zvinhu zvakashata zvinotumira vatengesi vako kukurumidza kupfuura iwe unogona kuzvitora. Rega ndizive, iwe ungati iwe uchaisa simba rinokosha nekushandisa zvinhu zvisina kunaka kana pane zvimwe zvakasiyana-siyana zvezvinhu zvinofadza zvaunogona kuita pawebhu here? Iwe unoziva, saKeezburger, inonakidza zvinyorwa zvekunyoresa paYouTube, uye iCHIVA pakati pevamwe. Chii chinoumba urombo husina kunaka?
Dhaka reState - Ndapota chengeta zvinhu zvako zvakare
Inadequately yakarongeka uye inofungidzirwa mifananidzo - Chimwe chezvifananidzo chine 660px muhupamhi, zvinotevera 350px
Yakapihwa zvinyorwa - Kusanganisira mifananidzo. Chikwereti chinyorwa kune avo vane pfuma, uye usamboitizve zvinhu. Hazvibvumirwi.
Shandura uye shandura pfuma yako pamagariro ekuti kupinda kwebhulogi kunotarisana nemhando uye kusiyana kwakasiyana-siyana kusinganzwisisiki kunongonyadzisa
Uyewo, edza kuwedzera kushandiswa kwezvakanyorwa paBlog WordPress yako. Nzira inonzwisisika inokurudzira vanhu kuti vaende kune mapeji akabatana
Musoro uye zvinyorwa zvinyorwa
Mifananidzo mikuru mikuru
Kusiyana kwemajeri akasiyana-siyana anofungidzirwa maziso (tsanidza kusvika kune maviri-matatu shading plans)
Mhepo yakawanda yechena
Zvinyorwa zvinoshamisa zvemashizha
Paunenge uchigadzira zvinyorwa zveBlogPress yako, sanganisira maitiro uye mavara, saka vanokanganisa vanogona kuwana hukama hunoita kuti varambe vachishandisa. Rangarira mupfungwa dzako kuchengetedza bhulogi rako richigadziriswa nezvinhu zvakanyanya kuchangobva sezvo ichisimbisa kuzvipira kwevatengi uye SEO.
Uyezve, ratidza kuti boka raunofarira raunoda kubva pakutanga rokutanga kuratidza kuti uri kutarisa kuunganidza kwakakwana kwevanhu. Zvimwe, iwe uchaisa maziso ako zvakakwana, iwe uchasvika pfupi uye uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uine huwandu huno.
Zvose zvinoedza kutambisa zvishoma paZves WordPress yako hazvingabatsiri paunenge uchitadza kuti iwe uri kutarisa kuungana kusina kunaka kwevanhu chero zvakadaro. Kana ini pane imwe nguva ndakazogovera nyaya pamusoro penzvimbo yandakakurira, Meru, Kenya, ndingashandisa mazano ari pedyo e SEO anowanikwa kwandiri kuti ndive nechokwadi chokuti handibvumi muvanotsvaga kutsvaga Mt. Meru muTanzania somuenzaniso. Mamiriro ezvinhu Ndingadai ndisingadi kukwevera kune vanokanganisa kutsvaga mutero weMeru muIndia kana vatengi vachitsvaga Meru Networks iri muTampa, FL.
Pamwe panjodzi yandakaenda nayo kune vose kunze kwevanhu vakawanda vanofarira chaizvo nzvimbo yandakakurira, Shoko rangu rePeoplePress rinonyora maitiro akareba-ose kubva pandakatarisa kune vateereri vakaipa.
Same inofamba yako PPC kukurudzira basa. Pachinhu chakanaka chokuti iwe unotarisa kuisa pfungwa dzako pane zvakaipa, iwe uchabhadhara kuti uise mune zvose kunze kwekufamba kwaunoda. Iko SEO yako nePPC mhirizhonga inofanira kutungamirirwa nemasprase ane njere anoongorora. Shandisa nhepfenyuro mubvunze nezvemadivayiri, semuenzaniso, Google AdWords Keyword Planner, Word Tracker, Yoast Suggests uye KWFinder.com pakati pevamwe.
Edza kusapika zvinyorwa zvekufarira zvisinei, tine mushure mako wakachengetedzwa nemazwi aya eEpress WordPress SEO Best for 2015 uye Beyond. Uyewo, vimbisa kuti iwe unoramba uri panzvimbo yepamusoro pamashoko ako ose akajeka eg egimiro rako kana zita remumwe.
Nezvekutengesa mahara, pane zvinhu zvakawanda zvaunogona kuita kuti uratidze hukama hwako uye uwane nzvimbo yako yakakodzera sefiddle. Kugadzirisa kuwirirana kwakaputsika, kusimbisa nzira yako yekupindirana uye kuzarura kubuda kwekunze mukati mamateji inzira inoshamisa yekutanga.
Mumwe mushanyi anogona kusvika pawebhu yako yepaIndaneti achishandisa chero peji yepaji webhusaiti kana kutumira. Chero mamiriro ose ezvinhu, kana kuputsika kwekubatanidza kunokonzera WordPress yako nzvimbo, tarisiro yako haizombogoni kuwana data yavanoda, uye naizvozvo, inotora kubata kumashure. Pamusana pekuda kuti vanoramba vachirova kubatwa kwemashure, iwe uchatsvaga kukwirira kwemazinga ari chirevo chisina kumira.
Iwe unogona kutarisa WordPress yako nzvimbo yekutengesa kushandiswa uchishandisa modhura, somuenzaniso, Broken Link Checker. Kunyangwe zviri nani, iwe unogona kushandisa hutungamiri hwekutengesa, semuenzaniso, W3C Link Checker. Zvakanakisisa ndeyokugadzirisa zvose zvese zvakagadzikana zvakanamatira kubva padziri kuti udzimise kuputika zvisati zvaitika.
Asi, chii chaunofanira kuita apo kubatana kunopera nenguva dzamanheru nekuda kwesimba rinokurumidza kana chimwe chikonzero? Zvechokwadi, izvozvo zviri nyore - iwe unogona kupikisa nyaya iyi kana nokuita mapeji e-404 kana kuparadzanisa kushamwaridzana kwakashata kune imwe nzvimbo yaunoda, somuenzaniso, iwe uri peji peji kana chero imwe peji yaunofarira.
Heino nzira yekuita mutambo 404 peji muShokoPress uye pano i Simple Simple 301 Redirects module kuti ibatsire nebhizimusi rinotsausa.
Kuona kubhadhara kwehuwandu kune chiyero chevashanyi vanovhiringidza kubva peji peji, kuwedzera kuoneka kwekubatanidzwa mukati memafuta kunogona kukurudzira vaenzi vakawanda kuti vakwanise kudarika peji iyoyo yekutanga. Pamusana pekana kuti iwe une mukana wekutsvaga kwebhulogi unotsigirwa nekugadzirisa kwako, ita izvi kubva pamapeji ako akasiyana, mapeji ekuuya anosanganisira.
Tarisiro iyo isati yakagadzirira kubvisa musungo pajiji yako yekukwazisa ingada kuongorora nzvimbo yako kukurudzira. Kubatana nezvinhu zvakakosha zvinoita kuti zvive nyore kune izvo zvichitarisirwa. Pavanenge vachifamba, bounce yako inowira.
Vhura Matanho Ekunze muNew Tabs
Kusati wasarudzwa pese kuchinja kwakashanduka kuva chokwadi, kuzarura kunze kwekubatanidza mumahwindo matsva kwakanga kusingafarirwi nevatengi sezvo yakakonzera kumusoro kwevateresi. Iva saizvozvo sezvazvingaita, sezvo sarudzo yakasarudzwa, kufambisa webhu ine dzimwe nzvimbo dzese nguva iyo yakazaruka inofanira kunge yakanyatsova nyore, uye kunyange inofadza.
Nhasi, haufaniri kunge uchizeza kuzarura chero kunze kwekubatanidza mune zvitsva zvitsva, kunze kwezviri pachena, vatengi vako vanobvuma mapurogiramu ekare asingasimbisi tabo. Ko kuzarura kunze kwekubatanidza mune zvitsva zvitsva kunoderedza kubhadhara mazinga pa WordPress yako site?
Rega uchiti iwe wakagadzira mukana mukuru weku blog, uye wakabatana nezvinhu zvinoshanda pane imwe nzvimbo yekunze. Pakaitika kuti uku kubatana kwekunze kunovhurwa mune imwe purogiramu window / tab, shanduro programming numbers iyo inobva. Iva sezvazvinogona, pane mukana wekuti iwe uzarure kunze kwekubatanidza mune zvitsva zvitsva, mutengeri wako anokwanisa kusvika kune imwe nzvimbo yekunze kunze kwekusiya nzvimbo yako. Paunenge uchibatanidza kubatana kwekunze, shandisa "Shandisai pane imwe festile / tab" chekuongorora sezvakaratidzwa sezvizvi:
Ongorora Zita rako rePepanhau reShoko
Amusingness ini pano: Ungaramba uchitenderera (uye unoshanda ne) site yakaratidzika sekuti yakashanda nemumwe wechishanu mutyairi here? Muchiitiko chekuti nzvimbo yako isiri nani kudarika mavhareji anotarisa, haukwanise kutarisira kuti vanhu vachabatisisa zvakakwana kwenguva yakareba kuti vatenge zvavanopa.
Isa zvinyorwa muhurukuro yakagadzirirwa zvakanaka, somuenzaniso, wega wega yemhando Yese Responsive Multipurpose WordPress nyaya. Uyewo, unogona kungova nehunhu hwakanaka uye hunofadza kubva kuWebsitePress.org kana vatengesi, semuenzaniso, Themeforest uye Elegant Themes.
Uyezve, unogona kuvaka nzvimbo yako chidimbu nechidimbu uchishandisa chikwata chekutanga chePeoplepress peji, somuenzaniso, Visual Composer kana Beaver Builder kuti utaure chete asi vaviri. Iwe unogonawo kushandisa zvinyorwa zvitsva zvinotenderera zvinosanganisira WordPress zvinyorwa zvese, somuenzaniso, Genesi kana Thesis.
Pamwe pacho pasina chero chinhu kunze kwekuti pane zvimwe zvingasarudzwa zvimwe zvingaita, uye iwe une mari yekuchengetedza, funga nezvekuwana svondo guru re WordPress designer kuti akugadzirire zvakananga zvaunoda (kungoyeuka izvi zvinowanzosarudzwa zvakanyanya uye zvakashata Kunyara kutsanangura nzira yekuzvinyora iwe pachako).
Paunenge uchivandudza shanduro yako, funga pamusoro pekubatanidza sehumwe hutano hwehutano; nhamba yevateveri, vatevedzeri, vanotonga - chero chinhu chinoudza mutengi vamwe vanhu vanokoshesa zvinhu zvako. Muchiitiko chekuti hauna huwandu hwehuwandu huripo, funga iwe kukanganwa hutano hwemagariro evanhu kusvikira pane imwe nguva sezvo mashoma akaderera anogona kudya vatengi vanovimba, pasinei nokuti iwe uri kungove wakananga.
Dzorera mapeji ako ekukwazisa zvakare uchishandisa kuongorora kweA / B uye kuongorora kwezvinhu. Chimwe chinhu chaunosarudza kusaisa hanya nacho chinosanganisira CTA inobata nzvimbo dzakajeka uye dzakajeka dzemashoko ako ekukwazisa. Chimwe chinotyisa kupfuura zvitatu zveCTA chinofanira kunge chakakwana; imwe yakakurumidza pamusana, imwe iri pakati uye yekupedzisira kusvika kumucheto.
Kunyange zvakadaro pane bhizinesi rekushanyira bhizimisi, shandisa kukwazisa mapeji eboka rako rakasiyana revanhu vanoona. Kushandisa zvinhu zvinoshamisa uye kuwedzerwa matekrasiro kwezvinhu zvose zvekuuya kuti uite kusanganiswa kwevanhu.
Kudzokera pane shanduro update, kuenzanisa ndiyo nzira inofambira mberi, kana seMaya Angelou (dai Mwari achizorora mweya wake murugare rusingaperi) akati, "Kuvharidzira kwekufambira mberi kunenge kusina kushanda nesimba."
Unoda kugadzira nzvimbo yeupfumi uye yakaoma iyo inowedzera mune tarisiro mune zvitsotsi? Panguva iyoyo unofanirwa kuita kuti zvive zvakanyanya kuoma uye zvakananga kushandisa nzvimbo pawebhu. Tanga nekurasa zvinhu zvisina zvazvinobatsira izvo hazvitsigire kana kuzadza zvaunoda.
Pamusoro peiyo, gadzirisa nzvimbo yakasvibiswa kubva pamapups obstructive uye kutengeswa. Mukuwedzera, vimbiso yemashoko aunoshandisa paShoko rako rePepanhau rinokosha kune zvinhu zvako uye unyanzvi. Isa zvinhu zvakakosha pamusangano, uye muchiitiko chaunogona, chengetedza nzvimbo yakakosha kubva kune-stacking kuona uye zviziviso zvinonzwika.
Panguva iyo zvose zvataurwa uye zvaitwa, vimbisa kuti nzvimbo yako inoteerera kuitira kuti iwe ucherecheke zvose madhidhiyo uye vatengi vakanyanyisa. Sarudza nyaya inoteerera yeShokoPress, (somuenzaniso, Total) kubva pakutanga. Nechivimbowo saizvozvo modules yaunosarudza yakanatsiridzwa pamatafoni.
Unoda tarisiro yekuenda mberi peji yepakati? Panguva iyoyo ita kuti zvive nyore kwavari kuti vawane huwandu hwezvinhu zvenyu. Iwe unogona kuisa zvakanamatira zvigadzirwa zvemashure kusvika kumagumo ekupinda kwako kwebhulogi kana kudivi rako rezasi - kungova nechokwadi chekuti zviri pachena kune vanyengeri vako. Kukurudzira nhau iwe haufaniri kuedza kuedza kwakanaka, kune Shoko risingaperi risina kukodzera mazwi e modules pakubatsira nebasa rakaoma zvechokwadi.
Pasinei nechokwadi chokuti izvi hazvisi kuchinja zvakanyanya kuwanda kwehutano hwako pakutanga, kuburitsa mabhuku kunogona kubatsira vateereri kuti vashandise nguva refu, izvo zvinoita kuti uwedzere kuwedzera. Kana iwe uchiita kuti vatengi vako vauye kuburikidza neboka re blog, havangatendi kukutenda iwe zvakare, kuisa simba rakawanda mubhulogi rako uye kugovera zvinhu zvako kune vamwe.
Zviri pamusoro pekupa tarisiro yako sehumwe senyaya pane imwe nzvimbo yako yepaiti - pamusoro pekutendeuka pamwe chete uye zvinogona kutarisirwa kuva mundima yako yakasarudzwa.
Apo iwe unoronga zvirongwa zvako, tarisiro yako uye zvinhu, uye shure kwekunge uvhara zvinhu zvose muhurukuro yekudenga, hapana chakakudzivirira iwe kubva pakuderedza Shoko rako rePepanhau rehuwandu hwemadhora.
Tora mazano ataurwa pano nhasi, uye iwe unofanirwa kuva nechirongwa chokugovana, kana mubvunzo wekukanda, tapota usazeza kushandisa nzvimbo iri pasi apa. Tinoda kunzwa kunzwa kwako - rega-siya!
8 inokosha CISCO CCNA Kudzidzisa & Cisco Zviratidzo